14 / 01 / 2019 - RayHaber | raillynews
Maalin: Janaayo 14, 2019
Shafak-Güzeloba-Altinova Jadwalka basaska ayaa bilaabmay
Dowladda Hoose ee Magaalada Antalya waxay xoojisay khadka TCDA49A, kaas oo gaadiid ku siiya Şafak Degmooyinka Kepez, oo leh khadadka ÜA26 iyo LF10 oo balaariyay jidkeeda. Ilaa Güzeloba iyo Kepez State Hospital ee degmada Districtafak oo leh khadad cusub [More ...]
Goobta Dalxiiska ee Denizli
Jannooyinka cad ee Pamukkale, ka dib magaalada jannada labaad ee cad ee jidka loo maro sidii loo hubiyo in tillaabooyin ka socda Xarunta Denizli Ski Center, ayaa noqotay kuwa ugu caansan ee jecel kuwa jecel barafka. Koorsooyin baraf barasho oo bilaash ah oo ay bixiso Denizli Metropolitan District [More ...]
Professor Xagga sare ee u socda Baki Komsuoglu Street
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli ee Kabaoğlu Degmada Izmit waxaa soo saaray Prof.Dr. Qandaraaska mashruuca xad dhaafka ee dadka lugeynaya ee lagu guuleysto Baki Komsuoğlu Street ayaa lagu xaqiijiyey dhismaha adeegga ee Dawlada Hoose. Dhanka hore hoyga TÜRGEV ​​oo ku yaal wadada [More ...]
Dhaqdhaqaaqyada Nostalgic Truis with View View
Kuwa doonaya socdaal noloshu ah oo aan la ilaawi karin oo leh aragti dabiici ah, doorashada ayaa ah inay tareen ku raacaan. Kars iyo Van waxay noqdeen cinwaanada ugu caansan wakhtiyadii ugu dambeeyay, halka kuwa raba inay sawiraan dariiqa u gaarka ah Adana ilaa Izmir. cajiib ah [More ...]
Gaadiidka TCDD Co. Liisaska ugu dambeeya ee codsadayaasha qoritaanka shaqaalaha 353 ee ay tahay in la helo Ka dib markii la helo codsi ka yimid İŞKUR, liisaska ugu dambeeya ee shaqaaleynta shaqaalaha ayaa la shaaciyey. 353 to TCDD Transportation Inc. [More ...]
Garoonka labaad ee Sabiha Gökçen Airport
Marka la eego baaxadda borotokoolka ay kala saxeexdeen DHMidency iyo Madaxtooyada Warshadaha Difaaca, dhismaha wadada labaad ee garoonka diyaaradaha Sabiha Gökçen, oo shaqooyinkiisa dhismuhu ka bilaabeen 2015 oo ay fulinayaan adeegyada kormeeradeena dhismaha, ayaa sii socda. Istanbul [More ...]
Saldhigga shirkadda gawaarida ee BMC ee Sakarya Karasu ayaa la dhigay
saaraha ugu weyn dalka Turkiga ayaa ka mid ah baabuurta ganacsiga iyo ciidamada xaflad groundbreaking BMC Plant Sakarya Karasu Recep Tayyip Erdogan ayaa ka mid ah Madaxweynaha, Wasiirka Difaaca Wasiirka Warshadaha iyo Technology Mustafa Hulusi Akar [More ...]
RayHaber 14.01.2019 Warbixinta Shirka
Qalabka Calaamadinta ayaa la iibsan doonaa
15 oo ka timid Turkiga Air Field
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, Turkey ayaa sheegay in sanadkii la soo dhaafay celceliska seconds 15 kasta oo hawada on diyaarad hadda. Turhan, oofiyey maalgashiga kaabayaasha Duulista iyo shubaa go'aanada dhaqanka ee ku yaala goobahan la Turkey [More ...]
Laga soo bilaabo Qoraayaasha American ilaa Erciyes
Qoraayaasha safarka ee wargeysyada iyo bogagga internetka ee Mareykanka ayaa booqday Erciyes. Duqa magaalada Mustafa Celik oo la kulmay qorayaasha safarka ee Erciyes ayaa u sheegay Kayseri iyo Erciyes. Erciyes iyo Kayseri [More ...]
Nidaamka Isgaadhsiinta Magaalooyinka Isgaadhsiinta ee Istanbul
Dhismaha jidadka metrooga, oo gaarayo badbaadinta dadka ay ku waxyeeloobeen isku socodka gaadiidka ee magaalada Istanbul, ayaa si xawli ah usocdaa. Iyada oo la fulinayo mashaariicda, qaar ka mid ah waxay qorsheeyeen in la adeego dhamaadka dhamaadka 2019 qaarna 2022, dhererka nidaamka tareenka ee Istanbul waa [More ...]
Murashaxa xisbiga AK Party ee Duqa Magaalada Ankara Mehmet Özhaseki, Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha iyo Magaalada Caasimadda waxay ka fulin doonaan shaqada caasimada iyada oo ujeedkeedu yahay in la keeno mashaariic muhiim ah. Buug-yaraha mashruuca Özhaseki ayaa ah midka ugu muhiimsan [More ...]
Tababaraha Dhibaatada ee Kaawada Ammaanka Florya
Magaalada Florya, Istanbul, Halkalı-Gebze khadka magaalada hareeraheeda ka dhigaya tijaabada wadista tareenka tareenka ee dhigaya khadka korantada, Florya ayaa isku dhacay. Shilka, dhaawaca 3 dadka ah, ayaa loo qaaday isbitaal. WASIIRKA GAADIIDKA [More ...]
Maanta taariikhda: 14 January 1920 Faransiis, Orient (Rumeli) Tareenka Taariikhda
Maanta taariikhda 14 Janaayo 1919 Hadımköy-Kuleliburgaz saldhigyada tareenka waxaa heystay Gariigta. 14 Janaayo 1920 Faransiis wuxuu qabsaday Agaasinka Agaasinka Tareenka. Karinta 14 ee ku saabsan 1933 Bonus Gudaha Gudaha 2094 [More ...]